Izesekeli Zekhebula ze-630A Abakhiqizi & Abahlinzeki | China 630A Ikhebula Izesekeli Factory
Thayipha Isixhumi Sangaphambili Esithintekayo
I-Anhuang ekhethekile ku-πtype isixhumi esingathinteka ngaphambili, sinikezela ngekhwalithi ephezulu π yohlobo olungathinteka ngaphambili kwesixhumi. Okujwayelekile: π Thayipha isixhumi sangaphambili esingathinteka sisetshenziswa kwinethiwekhi yezindandatho ngaphambi komphongolo, igatsha lekhebula lebhokisi noma ibhokisi libe uhlelo oluyinhloko lwendandatho yenethiwekhi, njengokuxhumeka kwekhebula nangaphandle. Ingaxhunyaniswa ku-630A junction nangemva kokuthinta inhlanganisela ehlangene ukudala isekethe exhunywe kakhulu. Okwamanje okulinganisiwe kohlobo lwe-T lokuthinta ngaphambili isixhumi kungu-630A, kusebenza ku-25-300m ...
35kV 630A T Ikhebula Isixhumi
I-Anhuang ekhethekile ku-T Cable Isixhumi, sinikezela ngekhwalithi ephezulu ye-T Cable Isixhumi. Okujwayelekile: 35kV 630A T Cable Isixhumi sinikezela ngoxhumano oluhlolwe ngokuphelele futhi olucwilisiwe ngokuphelele lapho luhlanganiswe ne-bushing efanele noma ipulagi. Ukuxhuma ikhebula le-polymeric kuma-transformers, switch switch, motors, kanye neminye imishini enesixhumi esihlukanisiwe esingahlukaniswa. Iphoyinti lokuhlola amandla we-Optional livumela isheke elilula lesimo sesifunda noma ukufakwa kwesikhombi sephutha. Lezi 36kV 630A T Ikhebula Co ...